Arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona:“Ndeha hihavana… Aoka tsy hampihatra herisetra” | NewsMada
Arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona:“Ndeha hihavana… Aoka tsy hampihatra herisetra”
Niarahaba sy nirary soa ny vahoaka sy ny kristianina ny arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona Odon, omaly tao amin’ny onjam-peo, RDB. Nampita hafatra koa ny solontenan’i Vatikana eto amintsika.
Nambaran’ny Mgr Razanakolona Odon fa tokony hisy heviny araka ny irin’Andriamanitra ity noely ity. “Tsy handalo toy fety hafa mirentireny ivelany fotsiny… Handeha hiainantsika ny finoantsika mba mitondra hetahetam-piovana… Ndeha hihavana sy hifankatia ka hahay hijery ny hafa ary hifampizara ny kely ananana. Hahay hionona amin’ny anjaran’ny tena.. Hahay hifehy tena sy tsy hampihatra herisetra… Mankalaza ny Noely tokoa isika raha tanteraka izany”, hoy izy. Notsiahiviny fa dingana iray lehibe nanamarika ny tantaran’ny firenena ny fifidianana natao ny 19 desambra teo. Nanteriny fa maro ireo mampitebiteby ny olona. Hanao ahoana ny ampitso ? Hisy fitoniana sy filaminana ve fa zary valala voatango ka very fanahy mbola velona ny sarambaben’ny vahoaka. Miaina anaty fitaintanana sy fahoriana isan-karazany. “Mety ho azon’ny fakam-pahany aza ny sasany ka hilaza fa manadino Andriamanitra ka tsy mihaino vavaka intsony, araka ny voalazan’i Izaia mpaminany”, hoy ihany izy.
Mihaino fa tsy manetsy tadiny Andriamanitra…
Notsindriny fa tokony hahatsapantsika ny tsy fandaozany antsika ny Noely. Tonga nofo ary miara-monina amintsika Andriamanaitra mba hampisy hasina ny andavandrontsika, araka ny nambarany. “Tsy mila voatsiary sy tsy manetsi-tadiny amin’ny mahazo ny olona Izy. Tanterahiny fampanantenana nataony. Hahita hazavana ny firenena nandeha amin’ny aizim-pito. Hahita hazavana satria eo amin’ilay zaza teraka ny fanjakana. Izy ilay mpanolotsaina mahagaga. Andriamanitra mahery… Tena mila io mpamonjy io isika”, hoy ny Mgr Razanakolona Odon. Nametra-panontaniana anefa ny tenany ny amin’ny hoe hatraiza ny fanekentsika hiaramonina aminy, mandray azy ho tonga zanak’Andriamanitra ? “Manaiky hotarihin’ny fanahin’Andriamanitra. Fanahy mampitombo ny fanantenana ao amintsika mameno hafaliana am-piadanana raha raisintsika am-pinoana”, hoy ny arsevekan’Antananarivo.
Mila ny fahazavana avy amin’Andriamanitra ireo mpanao politika…
Nampahatsiahiviny indray ny fahazavana ho entin’i Jesoa zazakely kosa ny solontenan’ny papa eto amintsika, ny Mgr Paolo Rocco Gualtieri tamin’ny hafatra Noely. Nohitsiny izany hazavana entin’ny krismasy izany ho an’ny malaelo ary fanantenana amin’ny fiainana, araka ny voalazany Soratra Masina. “Manazava ny olon-drehetra ny fahaterahan’ilay Mesia… Sokafy ny fontsika ho amin’izany fahazavana izany ary tokony hanomboka eo amin’ny tsirairay sy ny fianakaviana izany. Eo amin’ny fiaraha-monina sy eto amin’ny firenena”, hoy izy. Nohamafisiny fa manafaka ireo mijaly ny fahazavana avy amin’Andriamanitra. Ho an’ireo marary sy ny mpanao politika amin’ny andraikitra raisiny eto amin’ny firenena… “Mangataka antsika tsirairay handray izany hazavana izany satria ny Noely mitondra hazavana maneran- tany sy ho an’ny olona rehetra…”, hoy ity solontenan’ny papa François ity.